Popcorn Oge: New beta version 4.0 na-ekiri ihe nkiri na usoro online | Site na Linux
Popcorn Oge: versiondị ọhụrụ 4.0 iji lelee ihe nkiri na usoro ntanetị
N'ime ndị a oge nkewapụ ụwa (iche, ịkpapụ iche) oge, a manyere ọtụtụ n'ime anyị nwere njikọ tontanetị jiri oge nchọgharịMa ọ bụ ịgụ, ịde ihe, ịde blọgụ, ma ọ bụ naanị ikiri nkuzi, ịmụ akwụkwọ, igwu egwuregwu, ma ọ bụ ile ụfọdụ ọdịnaya dị na ntanetị.
Na kpomkwem, maka nke ikpeazụ, ndị okike nke Oge Popcorn na-adịbeghị anya ulo oru a ohuru beta, 4.0, nke magburu onwe ya emeghe ngwa.
Ee, Popcorn Oge! Ngwa a ka di ndu ma emelite ya ka anyi nwee ike iga n’ihu n’enye gi nma n'elu ikpo okwu onye oru ya dabere na bittorent protocol. Oge Popcorn bụ ezigbo ihe atụ nke otu esi Software ntanetị M na Mepee uzo nwere ike iji teknụzụ dịnụ rụọ ọrụ nke ọma ma maa mma iji nye ọtụtụ azịza bara uru, na ọnụ ala ma ọ bụ ụgwọ efu. Ọ bụ ezie na ụfọdụ, Oge Popcorn Ọ bụ ụdị nke ọzọ, ọ bụ ezie na iwu akwadoghị ya ma ọ bụ nye ya ikike, na nyiwe nyiwe dịka Netflix, dịka ọmụmaatụ.
En Ndokwa Ọ bụghị nke mbụ anyị kwuru gbasara ya Oge Popcorn. Ihe ikpeazụ anyị dere banyere ya bụ oku «Atụmatụ iji wụnye Popcorn Oge, Spotify na Telegram na DEBIAN», nke anyị na-akọwa Oge Popcorn dị ka:
"Popcorn Oge: Ọ bụ ngwa na-ebunye (mụta nwa) ma budata ihe nkiri, mmemme telivishọn (usoro) na Animes (Japanese Comics) na ntanetị (site na ịntanetị) site na faịlụ iyi. Ojiji ya dị mfe, ebudatara ya, budata ya, gbuo ya, họrọ ihe nkiri ma ọ bụ ihe omume, a na-ahọrọ ogo ọkpụkpọ na ndepụta okwu kwesịrị ekwesị, n'ikpeazụ pịa egwu ma nwee ọ enjoyụ".
Ka ọ were, anyị na-agba gị ume ka ị gụọ ya ma emesịa, maka ọdịbendị izugbe.
1 Oge Popcorn
Ugbu a, Oge Popcorn nwere a nkwụsi ike (3.0) na ugbu a nwere a ụdị beta ọhụrụ (4.0), nke nwere n’etiti ụfọdụ akụkọ, nke pụtara ìhè, nke bụ ọkwa gị na nke anyị Adreesị IP bụ ma ọ bụ nwere ike ịbụ geo-chọtara na esoro (nyochaa) site n'aka anyị ISP ma ọ bụ Gọọmentị, karịa ihe niile, site na ụdị ọdịnaya ejiri. N'ime ya, ọ na-agba anyị ume ka anyị jiri a Netwọk VPN iji kpuchido aha anyị na / ma ọ bụ nzuzo anyị, ma ọ dịkarịa ala, mgbe ị na-eji ya Oge Popcorn.
Ma ọ bụghị ya, nsụgharị ọhụrụ ahụ na-arụ ọrụ otu ihe ahụ dị na ndị gara aga, ya bụ, ọ na-eji ya onye kensinammuo na enyi na enyi interface, nke ahụ bụ, doro anya ma dị mfe, kemgbe na-egosi trending ọdịnaya (agba), na ndabara, ma na-enye anyị ohere ịchọ ọdịnaya site na nzacha edozi na elu, nkewapụrụ site na ngalaba. Dabere na ogo na bandwidth nke onye ọrụ ọ bụla, ọ nwere ike ịnweta mmezi ngwa ngwa nke ọdịnaya ọ bụla egosiri.
:Dị: Ihe nkiri, usoro na anime.
Họchaa site na: Ihe ndị a na-elele, Aha, afọ, na ogo.
Nbudata ya na iji ya dị mfe, naanị na anyị ga-aga Weebụsaịtị popcorn Time, kpughee, mepụta ụzọ mkpirisi na menu menu ma gbaa ọsọ ịmalite lelee ọdịnaya multimedia anyị na ntanetị họọrọ ma ọ bụ chọrọ.
N'ikpeazụ, ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na, Oge Popcorn bụ ngwa na kemgbe ịdị adị ya ma ọ bụ akụkọ ntolite ya ewetala ọtụtụ nsogbu, ma nke iwu kwadoro site na ọdịnaya enyere nke megidere nwebisiinka nke ụlọ ọrụ ndị na-emepụta ha, yana asọmpi maka mgba n'etiti otu mmepe nke ngwa yiri (ndụdụ).
Ya mere maka ugbu a Oge Popcorn, na-arụ ọrụ na emelitere, mana anyị amaghị maka ogologo oge. Ya mere, ọ bara uru iji ya na ịnụ ụtọ ya n'oge ndị a owu na-ama n'ụlọ, nke anyị ga-enweta n'ihi Ọgbaghara covid-19.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ngwa magburu onwe ya eji aha «Popcorn Time» kere nke mere na á »tá» users tá »users Internet huu n'anya ihe nkiri, usoro TV na anime, nwere ike ịchọta ma lelee ọdịnaya a kwuru site na a ikpo okwu dabere na protocol bittorrent, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Popcorn Oge: New beta version 4.0 na-ekiri ihe nkiri na usoro online